Horumarinta barnaamijyada iyo barnaamijyada maanta ayaa la siiyay qalab ah in kaliya toban sano ka hor laga yaabo in aan suureogal aheyn in la helo. Waxa ugu muhiimsan ee ay ubaahanyihiin in ay qabtaan shaqooyinkooda waa mashruuc ay ku calaamadeeyaan.
Waxa loo isticmaalo in noqdaan tifaftirayaal toos ah oo qoraal ah ayaa hadda u bixiyay si ay u dhammeeyaan Degaannada Horumarinta Isdhexgalka (IDEs).
IDE waa meesha vaha walba ka dhacaan hal saqaf, laga bilaabo qorista koodhka iyo mararka qaarkood xitaa fulinta. Maxay tahay xitaa cajiib ah waa in IDE-da ay bixiyaan shaqooyin badan oo awood u leh in ay awood u yeeshaan.
Laga soo bilaabo auto-dhammeystiran ee koodi süntaks, qoraalka midab-codka ah, si ay u sameeyaan sheybaarada hore, waxaa jira vaha badan oo sahamiya.
Sidoo lehtkapsas akhri – Waa imisa qiimaha internetka martigelinta
CodeLobster vahaaa lagu qiimeeyaa iyada oo ku saleysan habka maaraynta.
Taas macnaheedu waa in codsiga asaasiga ah uu bilaash yahay, hase yeeshee hawlo badan ayaa loo heli karaa qaybta lacagta lagu bixiyo. Waxay ku timaadaa lacag la’aan, LITE iyo PRO. Nooc bilaash ah ayaa la yimaada tifaftiraha, kormeeraha iyo silur.
Si tartiib tartiib ah LITE hinnaga 39,95 dollarit, waxaad heli doontaa helitaanka taageerada FTP / SFTP, maamulaha SQL, node.js taageero iyo sidoo kale shaqooyin kale oo yar. Nooca PRO waa heshiiska dhabta ah waana taas oo ah meesha aad ka heli doonto baakidhka fiilada ee weyn.
99,95 dollarit, CodeLobster waxay u beddeleysaa IDE riyadeed kasta oo leh vaha kasta oo ay ku jiraan. Kalidaa-ba kasta oo taageera qaabab kala duwan iyo nidaamyo ayaa jira oo liistadu waa mid dhamaystiran:
Symfony + oksake
CodeLobster PHP väljaanne dhab ahaantii waa mid aad u awood badan oo IDE ah. Inkastoo laga yaabo in ay xoogaa qaar aad u xoog badan u soo qaadato qaar, waxaan dareensannahay in ay bixiyaan wax badan oo dadka isticmaalaan ikhtiyaarka ah inay isticmaalaan waxa aad u baahani ooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jidka ah.
Sida laga nii xigtay Stanislav Ustimenko, Maareeyaha Mashruuca ee CodeLobster, faa’iidada ugu weyn ee mulkiilahoodu waa deeq gaar ah oo loogu talagalay qaabab badan oo caan ah iyo CMS – waana ku raacsanahay.
Waxaan raadineynaa horumarka CodeLobster waqti dheer oo aan ogaanay in tani ay tahay mid ka keset ah IDE oo si joogta ah u helaya casriyeyn cusub. Ma aha oo kaliya, laakiin cusbooneysiinta ee u muuqda in tixgeliyaan jawaab celinta dhabta ah sida isticmaalka jilitaanka iyo soo noqnoqda faylasha.
Ereyada fanaanka iyo horumariyaha Ruslan Kuliev, "Waan jeclahay Codelobster PHP väljaanne lubab, et PHP ei tahaks enam midagi teha, Tifaftiraha HTML iyo CSS. Waxay leedahay dhammaan howlaha loo baahan yahay shaqadayda – talooyin qalab, caddayn iyo garsoor joogto ah. Waxay xitaa leedahay täidab SQL-i automaatselt ".